Dagaal Dib Kaga Qarxay Magaalada Gaalkacyo. – Bogga Calamada.com
Dagaal Dib Kaga Qarxay Magaalada Gaalkacyo.
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug waxaa dib kaga qarxay dagaal culus oo u dhaxeeya maleeshiyaatka maamulada gaala raacyada ah ee Puntland iyo Galmudug.
Dagaalka waxa uu si gaar ah kaga qarxay dhanka Galbeed ee magaalada Gaalkacyo oo maalmihii u dambeeyay dhowr jeer ay ku dagaalameen maleeshiyaatka maamulada Ashahaado la diriryada ah ee Puntland iyo Galmudug.
Dagaalkan waxey labada maleeshiya isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan’waxeyna maleeshiyaatka dagaalamaya madaafiic culus ku kala garaacayaan xaafadaha dhanka Konfureed iyo dhanka Waqooyi oo labada maamul ay ka kala arimiyaan.
Si rasmi ah looma xaqiijin karo khasaaraha ka dhashay dagaalka maanta markale dib kaga qarxay dhanka Galbeed ee magaalada Gaalkacyo.
Magaalada Gaalkacyo ayaa laga barakacay tan iyo markii maalmo ka hor dagaalada u dhaxeeya labada maamul gaaleedyada dib kaga soo cusboonaadeen magaaladaasi.
Boqolaal qoys oo kasoo barakacay degmada Gaalkacyo ayaa lagu soo dhaweeyay degmooyinka iyo deegaanada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ka maamusha gobalka Mudug sida magaalooyinka Xarardheera iyo Jowle.